U-Edson Glauber-Ilixa lokuGqibela liyeza-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
U-Edson Glauber-Ilixa lokuGqibela liyeza
Ukumkanikazi weRosary kunye noxolo ukuze Edson Glauber nge-15 ka-Agasti ka-2020:
Uxolo, bantwana bam abathandekayo, uxolo!
Bantwana bam, vuyani ngoMama wakho Ongenakuvuka, ovuselwe ezulwini ngomzimba nangomphefumlo. Ukuzukiswa kwam emazulwini kukulangazelela uzuko lomntu ngamnye kunye nabo bonke abathembekileyo kwiNkosi kude kube sekupheleni kwaye bahlala kweli lizwe, bezinikela eluzukweni lobukumkani bakhe bothando kwaye befezekisa ubuThixo bakhe Intando.
Ubukho bam obungenabala nobuzukileyo emhlabeni luphawu olukhulu lothando lukaThixo ngawe. Sukoyika izilingo neembandezelo ekuya kufuneka uzinyamezele ngenxa yothando loNyana wam. Uya kuba nakho ukunyamezela yonke into ngothando nangokholo. UNyana wam oyiNgcwele sele ekunikile ubabalo kwangaphambili xa ndivela ezulwini ukuzokubusisa ngokubonakala kwam phakathi kwakho kuyo yonke le minyaka idlulileyo, xa ndikunike iintsikelelo ezininzi kunye nobabalo oluvela ezulwini.
Banoyolo abo bakholelwe ngaphandle kokuba babone kwaye abazamkelayo ezi ntsikelelo kunye nokubongwa ngokholo oluncinci nothando lweentliziyo zabo. Abayi kuphoxeka okanye balahliwe yiNkosi ngamaxesha obunzima, kuba abayishiyanga iNkosi, okanye mna, uMama wabo waseZulwini, ngamaxesha eentlungu, izilingo kunye nokuhlaselwa komsebenzi wam wothando. Kodwa yeha kwabangakholwayo, yeha ke abo baye baphulukana nokholo lwabo, kwaye baba ngabangenambulelo, besala, betshutshisa kwaye bechitha imisebenzi engcwele kaThixo ngamazwi abo kunye nemizekelo emibi. Ngenye imini baya kuba phambi kweNkosi ubuso ngobuso, kwaye loo mini iya kuba yoyikeka.
Khumbula, bantwana bam: baninzi ababiziweyo, kodwa bambalwa abanyuliweyo, ngenxa yokuba abaninzi bengakholelwa kwaye abanalo ukholo ezintliziyweni zabo. Amagama am athethwe apha aya kuzalisekiswa, kwaye xa sele efezekisiwe uninzi lwabangakholwayo luya kulila ngokukrakra ixesha elilahlekileyo kwaye baya kucela ukuxolelwa kunye nenceba xa bebona uninzi olukholwayo lususiwe Njengemiyalezo kaEdson (singasathethi ke ngabo bonke iimboni eziyinyani ezithetha ngamaxesha azayo) ephindaphinda ebhekisa kwabathembekileyo emhlabeni benyamezele izihlwayo ezisemnyango, ngokucacileyo lo myalezo akufuneki uthathwe njengobhekisa kuqondano oluqhelekileyo “loXwilo , ”Imfundiso exhaphakileyo kweminye imijikelezo yeVangeli apho, ngaphambi kokuba imbandezelo iqalise, onke“ amakholwa okwenene ”kwihlabathi lonke athathwa ngokungummangaliso kwaye ngephanyazo anyuselwa esibhakabhakeni, kuphela ukuba abuyiselwe emhlabeni xa amaxesha olingo ephelile. ukujoyina iNkosi phambi kwamehlo abo, kwaye aba bangakholwayo baya kuhlala kwihlabathi ukuze bohlwaywe ngothuselo olukhulu oluza kubo, besihla ngokuqatha ezulwini bezohlwaya aboni. Thandaza, thandaza, uthandaze, kuba ilixa lokugqibela liyeza.
Ndinisikelele nonke: egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele.
Njengemiyalezo kaEdson (singasathethi ke ngabo bonke iimboni eziyinyani ezithetha ngamaxesha azayo) ephindaphinda ebhekisa kwabathembekileyo emhlabeni benyamezele izihlwayo ezisemnyango, ngokucacileyo lo myalezo akufuneki uthathwe njengobhekisa kuqondano oluqhelekileyo “loXwilo , ”Imfundiso exhaphakileyo kweminye imijikelezo yeVangeli apho, ngaphambi kokuba imbandezelo iqalise, onke“ amakholwa okwenene ”kwihlabathi lonke athathwa ngokungummangaliso kwaye ngephanyazo anyuselwa esibhakabhakeni, kuphela ukuba abuyiselwe emhlabeni xa amaxesha olingo ephelile.
exhonyiweyo Edson noMaria, imiyalezo.
← UGisella Cardia - Izazela ezininzi…
UGisella Cardia - Suku… →